Fikarohana momba ny firaisana Fanentanana an'ny filoham-pirenena Marianne Williamson sy ny fiainany taloha amin'ny maha-Abigail Adams, miaraka amin'ny tranga reincarnation izay manatevina an'i Neale Donald Walsch, Deepak Chopra ary John Hagelin - Fikarohana Reincarnation
Nambara na voamariky ny: Fanampiana avy amin'ny Fanahy na Fanahy Ahtun amin'ny alalan'i Kevin Ryerson
Cases Resear by: Walter Semkiw, MD
Ny fiainana taloha an'i Marianne Williamson & John Hagelin tamin'ny tolom-bahoaka Amerikanina
Tao amin'ny fikarohana momba ny vovoka tany am-bohoka, talohan'ny nihaonako tamin'i Kevin Ryerson, dia nieritreritra aho fa ilay mpanoratra mivarotra tsara indrindra, Marianne Williamson, ary mpitsabo John Hagelin, dia anisan'ny vondrona Revolisionera tany Boston. Hagelin dia nihazakazaka ho filoham-pirenena amerikana tao 2000 teo ambanin'ny Antoko Lalàna Natiora Maharishi Mahesh Yogi. Ahtun Re tatỳ aoriana dia nanamafy ireo lalao ireo, izay anisan'ny tarika 60 izay nodinihiko niaraka taminy nandritra ny fotoam-pivoriana voalohany nataonay. Ireo revolisioneran'i Boston izay akaikin'i John Adams. Ireo tranga roa ireo dia voafaritra amin'ny antsipiriany ao Fiverenan'ny revolisionera.
Ny fiainam-pandevonan-tsoratra taloha nataon'i Marianne Williamson
Nihevitra aho fa ny lalao eo amin'i Abigail Adams sy Marianne Williamson dia mifototra amin'ny fitoviana amin'ny fomba fanoratana, alohan'ny nahitako ny sarin'i Marianne. Tamin'ny famakiako ny tantaran'ny Amerikanina nandritra ny Revolisiona, dia nanjary fantatro tsara ireo taratasy nosoratan'i John sy Abigail. Rehefa nanoso-kevitra ny namaky boky iray nosoratan'i Marianne ny namako, dia gaga aho nahita fa manana ny linguistista mitovy aminy izy, ilay feo manoratra, toa an'i Abigail Adams. Fandalinam-pahaizana manokana natao tamin'ny tranga vao teraka indray John B. Gordon Jeff Keene dia maneho fa ny fomba fanoratana dia afaka mitoetra hatrany mitovy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa.
Fantatro taty aoriana fa ny maherifo manokana an'i Marianne dia tsy iza fa i Abigail Adams. Ny hetsika synchronistic dia nahatonga anay hihaona voalohany tamin'ny Andron'ny mpifankatia, tamin'ny 2001, talohan'ny nanaovako ny fivoriana voalohany niarahana tamin'i Kevin. Tamin'izany fotoana izany dia nanaiky i Marianne fa ho tafiditra ao amin'ny Return of the Revolutionaries ho teraka amin'ny vatana vaovao indray i Abigail. Taorian'ny nanambarako ny fiaraha-miasa tamin'i Kevin Ryerson tamin'ny Oktobra 2001, Marianne Williamson dia nohamafisin'i Ahtun Re ho ny fanambadiana indray ao amin'i Abigail Adams, vadin'i John Adams.
John Hagelin, ao amin'ny University Maharishi & TM Movement, toy ny Reincarnation an'i James Otis
Izaho koa dia nihevitra fa i Jaona Hagelin no taonan'ny fahaterahana indray James Otis, Jr, mpisolovava avy any Boston izay heverina fa manjavozavo, izay nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny hetsika revolisionera tamin'ny famoahana ny britanika tany amin'ny fitsarana mikasika ny "Writ of Assistance", fikarohana lalàm-pikarohana tsy ara-dalàna sy fananganana. I Hagelin koa dia nanaiky ny ho ao anatiko revolisionera boky ho an'i Otis talohan'ny nihaonako tamin'i Kevin, na dia nanamafy ny lalao aza i Ahtun Re taorian'ny nanombohako niasa tamin'i Ryerson.
John Hagelin | James Otis Reincarnation-Case Life Case
Neale Donald Walsch, mpanoratra ny fivarotana ara-panahy tsara indrindra, Resadresaka miaraka amin'Andriamanitra, dia akaiky an'i Williamson sy Hagelin. Walsh sy Williamson samy nanohana ny filoham-pirenen'i Hagelin tao 2000 ary i Williamson sy Walsch dia nanangana ny Global Renaissance Alliance. Noho izany, nanontany tena aho raha toa i Neale tao Boston nandritra ny Revolisiona Amerikana ihany koa, na dia tsy fantatro aza hoe iza no azony natao.
Torolalana ho an'ny fanahy na Fanahy Ahtun dia manambara ny fanandraman'ny fiainana taloha ho an'i Donald Walsch
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re nilaza tamiko fa i Walsch dia tena minisitra tao Boston izay namana tsara tamin'i John sy Abigail Adams, ary izy koa dia mpiara-dia tamin'i John Hagelin tamin'izany fotoana izany. Nanontany an'i Ahtun aho hoe inona no anaran'i Neale tamin'io vanim-potoana io. Ahtun Re nilaza tamiko fa i Neale dia fantatra ho Walter Reverend, ary izy dia mpitandrina Boston sy Freemason, izay nanohana ihany koa ny antony Anglikana.
Ny fanoheran'i Walter dia tsy tao amin'ny boky tantara izay azoko jerena, fa afaka nahita azy tamin'ny New England Genealogical and Historical Society (NEGHS), izay any Boston. Ny fitadiavana ny diarin'i John Adams nataon'i NEGHS dia nanambara ny minisitra iray fantatra tamin'ny Adamses tamin'ny anaran'ny Rev. Walter. Ity minister dia William Walter, teraka tamin'ny 7 1737 tamin'ny Oktobra. Nahazo ny fahazoan-dàlany ho minisitry ny asa any Angletera i Luther, evekan'i Londres. Noho izany, Rev. Walter dia mpanompo Anglikana, araka ny nolazain'i Ahtun Re. Rev. Walter dia niverina tany Boston ary navotsotra tamin'ny ministera tamin'ny Jolay 1764, tao Trinity Church. Tamin'ny volana Aprily 4, 1768, Rev. Walter dia nofinidy ho Mpitarika ny Trinite Church. Nisy biography avy tao amin'ny Harvard College izay nanamafy fa ny Rev. Walter ihany koa dia olon-tsy fantatra, araka ny nosoratan'i Ahtun Re.
Ny Torolàlana ho an'ny Fanahy Ahtun Re momba an'i Neale Donald Walsch dia nohamafisin'ny mpikaroka ao amin'ny New England Genealogical & Historical Society
Ny fidirana iray ao amin'ny diarin'i John Adams momba an'i Reverend William Walter, natao tamin'ny 24 Mey 1773, dia omena etsy ambany. Ity fidirana ity dia miresaka lehilahy roa hafa, ny Kolonely sy ny Major Otis, izay ray sy zanaka. Ny zanakalahy, Major Otis, dia manondro an'i James Otis, izay tamin'ny andro ankehitriny dia fantatra fa John Hagelin. Andao isika izao hitodika any amin'ny fanamarihan'i John Adams. Ny teny hoe "parson", izay ampiasain'i Adams, dia mitovy amin'ny "respend." Napetrako ny mombamomba ireo mpilalao tafiditra ao anaty fononteny ankehitriny, mba ho mazava kokoa. John Adams nanoratra:
“Nandany an'ity takariva ity tany amin'ny Wheelwrights, niaraka tamin'i Parson Williams of Sandwich. . . . Williams dia nandray ny takariva manontolo tamin'ny Tantara momba an'i Coll. Otis sy ny zanany lahy lehibe [John Hagelin]. Niasa ny Major [John Hagelin]. . . Parson Walter [Neale Donald Walsch] hisolo tena azy amin'ny Governora ho sakaizan'ny governemanta, mba hahazoana ny vaomiera lefitra kolonely.
Ny Major [John Hagelin] dia nanoratra momba ny Liberty tao amin'ny tranony mpanamboatra. . . . Col Otis dia namaky tamin'ny faribolana lehibe an'ny besinimaro, Allens Oration momba ireo hatsaran-tarehin'ny fahalalahana ary nanolotra izany ho famokarana tena tsara. ” (1)
Mariho fa Major James Otis | Nanontany an'i Parson Walter i John Hagelin Neale Donald Walsch ho fanampiana amin'ny fahazoana toerana ambony ambony ao amin'ny governemanta Britanika Royal. Ataovy an-tsaina fa nitranga io alohan'ilay Revolisiona Amerikana io ary nisy mpitarika maro nanohana ny mpitarika tao amin'ny rafitra Britanika talohan'ny nanambarana ny fahaleovan-tena. Ny mpitondra fivavahana sy ny minisitra dia mpitarika ny fiarahamonina ary toy izany, Reverend William Walter | Neale Donald Walsch dia afaka nanampy an'i James Otis | John Hagelin amin'ny fametrahana fitarihana lehibe ao amin'ny governemanta.
Ny fifandraisana amin'ny fiainana taloha dia navaozina tamin'ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Neale Donald Walsch & John Hagelin
Mariho koa fa mitovitovy amin'ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao i Hagelin sy Walsch. Tao anatin'ny fampielezan-kevitry ny filohan'ny 2000, Hagelin nanampy an'i Walsch ho fanampiana fanampiana amin'ny fandaharam-bola, tahaka ny nanesoran'i Otis ny Mpanafaka Walter tao anatin'ny fanentanany hiantohana ny laharana ny kolonely malaza. Koa eto isika no nanorina, raha toa ka manan-kery ny maha-olom-pirenena taloha, fifandimbiasan'ny karmic revolisionera teo amin'i John Hagelin sy i Neale Donald Walsch.
Ny fanamafisana an'i Walter dia niezaka ny hitazona ny fihetsika tsy misy antra misy eo amin'ireo mpomba ny mpifaninana sy ny revolisionera eo anivon'ny fiangonana. Noho izany, ny Reverend Walter dia nitoetra tamim-pahasoavana tsara tamin'ny Patriotsa sy ny mpikamabana mandra-pahatongan'ny toe-javatra nampalahelo. Tamin'ny volana febroary 1776, tahaka ny nataon'i Sine Common Sense dia nanao fampisehoana, nampangaina ny Walter Reverend Walter hanandrana hampiely paompy ao anatin'ny tafika Patriot. Voangy vao haingana ny vaksinin'ny pneoma, saingy nisy ny fifanoheran-kevitra mikasika ny fahavoazana raha ny vaksin no nanao ratsy kokoa noho ny tsara. Ny olona izay nodiovina dia mety manaparitaka ny aretina amin'ny hafa mandritra ny fe-potoana iray, ka tsy maintsy niditra tao amin'ny tranomaizina tsy maharitra ny vaksiny.
Ny zava-nitranga dia misy zazalahy kely izay niampanga ny Mpanaja Walter tamin'ny fanerena ny fanolorana azy. Nilaza ilay tovolahy fa ny Reverend Walter dia nandidy azy handeha ho any amin'ny toby miaramila Patriot iray izay nidinan'ilay zaza niaraka tamin'ilay poaka. Izany dia nametraka ny miaramila Patriot ho tandindomin-doza ny fifanarahana ny aretina. Na dia sarotra ny maminavina fa marina io kaonty io, dia toa nanaiky ny tantaran'i Boston ny sasany tamin'ireo Bostoniana ary niampanga ny Rev. Walter hanandrana hampiely paompy ao anatin'ny tafika Patriot. Nametraka azy ho Loyalista sy mpamadika izy. Vokatr'izany, nodimbiasana ny tranon'ny Rev. Walter ary voatery nandositra tany Angletera izy tamin'ny 1776.
Famerenana ny fitohizan'ny fiainana taloha tamin'ny zaridaina nateraky ny zaridaina tao Neale Donald Walsch: Minisitry ny fonja
Tamin'ny lohataonan'i 1777 dia niverina tany New York i Walter raha mbola teo ny Ady Revolisionera, ary voatendry ho mpitondra fivavahana ho an'ny miaramila Bartholomion any Grande-Bretagne. Amin'io andraikiny io, i Walter Reverend dia nanampy tamin'ny gadra Patriot tamin'ny ady. Manoratra ny mpanoratra iray fa ny "hatsaram-panahy amin'ny gadra Amerikana dia malaza" an'i Walter. (2) Ity serivisy ho an'ny gadra Patriot ity dia mifanaraka amin'ny fanambaran'i Ahtun Re fa nomen'i Walsch fialofana na fanampiana ho an'ireo revolisionera.
Mahaliana ihany koa fa nanatrika ny fonja iray ny Reverend Walter, satria nanangana programa manokana i Neale Donald Walsch mba hanomezana boky ho an'ireo voafonja fonja amin'izao fotoana izao. Noho izany, i William Walter sy i Neale Donald Walsch dia samy manana tantaram-pirahalahiana iraisam-pinoana ho an'ny mponina am-ponja.
Fifandraisana amin'ny fiainana taloha: Naleon'i Donald Walsch i Abigail Adams
Tamin'ny volana desambra tamin'ny 1783, niverina tany Angletera ny Reverend Walter ary tamin'ny volana 1784 dia niantso an'i Abigail Adams handray azy tany Londres. Vao tonga kelikely i Abigail niaraka tamin'i John vadiny, izay nanompo tany Angletera. Ity fitsidihana ity dia manaiky ny fifandraisana karmic misy eo amin'i William Walter | Neale Donald Walsch sy Abigail Adams | Marianne Williamson tamin'ny vanim-potoanan'ny revolisiona. Araka ny nomarihina teo aloha, amin'izao fotoana izao, i Marianne Williamson dia nanangana ny Global Renaissance Alliance miaraka amin'i Walsch voatonona ho mpiara-manorina.
Torolalana ho an'ny fiainam-piainan'i Ahtun Re momba ny fiainana taloha dia voamarina: ny Reverend Walter dia Anglikanina & Freemason
Tamin'ny Jolay sy Aogositra 1787 dia niverina tany Boston i Walter Reverend, ary nasaina nitory tao amin'ny Fiangonana anglikanina izay avy amin'ny Fiangonana Angletera. Talohan'ny nanaovana sesitany azy tany Angletera dia fantatra fa i Walter no nanohana ny fananganana evekan'i Anglikanina tany Amerika, izay nahatonga fifandirana teo amin'ireo Amerikanina tsy miankina. Io fifaneraserana amin'ny fiangonana Anglikanina io ary ny fiantsoana ny Eveka Anglikanina dia mifanaraka amin'ny fanambaran'i Ahtun Re fa nanohana ny Anglikana i Walsch, nandritra ny androm-piainany revolisionera.
Voamarina ihany koa fa Maherin-java-maneno ny Walter Reverend ary niresaka tamin'ny hetsika Masonika. Nanoratra ny mpandinika iray hoe: "Dr. Walter dia mendri-maso mason'i Walter satria nahita ny andraikitr'io fikambanana io ho tia ny olombelona. "(3) Mitovy amin'ny fanambarana hafa nataon'i Ahtun Re fa i Walsch, tamin'ny andron'ny revolisiona dia Freemason.
Rehefa nandeha ny taona taorian'ny fiverenany avy tany Angletera, dia nanaiky ny Walter Reverend ny olona tao Boston ary tamin'ny farany dia lasa mpitan-tsoratry ny Kristy Church izy tany Boston. Ny fanoloran-tena Walter koa dia nitory matetika tao amin'ny Fiangonana Kristianin'i Cambridge. Maty tamin'ny 5 1800 tamin'ny volana Desambra izy ary nalevina niaraka tamin'ny fanomezam-boninahitra an'i Masonic tao amin'ny fasam-pianakaviana iray teo ambanin'ny Fiangonan'i Kristy. Nisy varavarankelin'ny fahatsiarovana natsangana tao amin'ny Trinite Church ho fanomezam-boninahitra an'i William Walter. Ny fanindrahindrana Walter dia tafavoaka velona tamin'ny zaza fito.
Ny toetrany taloha dia ny toetran'ny toetran'i Neale Donald Walsch
Ankoatra ny antsipiriany ara-tantara izay mifanaraka amin'ny filazan'i Ahtun Re momba an'i Walsch amin'ny vanim-potoana Revolisionera sy ny fisian'ny fifandonana karmika amin'i Abigail Adams | Marianne Williamson sy James Otis | Ny John Hagelin, ny toetra maha-olona sy ny toetran'ny olona dia azo raisina eo anelanelan'ny Reverend Walter sy i Neale Donald Walsch.
Ohatra, nilazako aho fa mazoto mivezivezy i Walsch ary tia manao akanjo tsara izy. I Walsch dia niboridana ampahibemaso ny zava-poany. Tamin'ny hetsika fanangonam-bola natao ho an'i John Hagelin, nilazan'i Walsch ny tantara fa fony izy nipoitra ny iray amin'ireo ahiahiny lehibe indrindra dia ny "volony" sy ny fomba nanamboarana azy. Mifanaraka amin'ny fomba fahatsiarovan'ireo vehivavy damosin'i Boston ny Reverend Walter. Nanamarika ny iray tamin'ireo vehivavy ireo:
"Dr. Walter dia lehilahy tsara tarehy indrindra, lava sy refy. Rehefa teny an-dalana dia nanao akanjo lava manga teo ambonin'ny vatany sy ny akanjo nataony izy; wig lava feno, mitafy ary vovoka; satroka telo-zorony; lambam-pandriana lohalika lamba mainty manify, misy fantsona landy mainty; ary kiraro efa-joro toradroa, miaraka amina volo volafotsy. (4)
Walsch, azoko tsara, koa dia tia kiraro faran'izay tsara. Walsch dia mpilalao sarimihetsika sy radio taloha ihany koa. Ireo anjara asa ireo dia mifanaraka amin'ny fanambarana natao momba an'i Reverend Walter: "Ny fiheverany manontolo dia ny akanjo, baolina, fivoriambe ary kilalao;" (5) "ny feony dia mazava, mozika ary maotina tsara." (6)
Toetra niavaka taloha: Walter & Walsch dia metapisika
Ny singa iray iraisan'ny Common between Reverend Walter sy Walsch dia samy namolavola ny asa ara-panahy sy metapisika izay nahalalaza be. Walsch, mazava ho azy, dia nanoratra ny Resadresaka miaraka amin'Andriamanitra andiany, izay efa namidy an-tapitrisany. Ny Reverend Walter, amin'ny fomba maody, dia namokatra toriteny malaza be izay manana kalitao metafizika. Ireto misy teny manaraka momba an'i Reverend Walter dia maneho ireo hevitra ireo. “Nahagaga ny lazan'ny tovolahy nitory.” (8) Mikasika ny toriteny nataon'i Walter, dia nisy mpihaino iray nanoratra hoe: "metafizika nefa voafantina tsara ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny." (9)
Fitondran-tena taloha: Walter & Walsch dia liana amin'ny ET's
Ny tena mahavariana indrindra dia ny fanomezam-boninahitra an'i Walter ao amin'ny valo ambin'ny folo dia nanome torolalana izay niresaka momba ireo olona hafa tafahoatra. Ity foto-kevitra ity dia mifanaraka amin'ny fanazavana ao amin'ny Resadresaka miaraka amin'Andriamanitra, Boky 3 izay nanoratan'i Walsch momba ny "zavamananaina be mponina", izay avy any ivelany (ETs) avy amin'ny planeta hafa. Walsh dia manoratra fa ireo zavamananaina be mpahalala ireo dia feno hatsaram-panahy sy lava kokoa noho ny olombelona eo amin'ny ambaratonga evolutionary. Andeha hojerentsika izao ny tenin'i William Walter Walter, izay nosoratana tamin'ny taonjato faha-18, araka ny ambarany fa Andriamanitra no namorona an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny planeta nipoitra tamin'ny endri-piainana, ary nomena tamin'ny ambaratonga samihafa ny faharanitan-tsaina.
“Miteny Izy, ka, indro! ireo Masoandro miseho mahatalanjona ao amin'ny Concave lehibe, dia misy avy hatrany; Masoandro izay mason'ny Herschel na Newton. . . Tsy mahay manisa izy: Mandidy Izy, ary, indreo,! Ireo Masoandro ireo dia voahodidina Planeta, ary ireo satelita miaraka aminy, voaomana miaraka amin'ny Fandraisana an-tanana ireo Fanahy rehetra. Tsy azo inoana izany fa ireo Mponina ao amin'ireo tontolo tsy tambo isaina izay mihodina tsy mitsahatra manodidin'ny afovoany afovoany, izay mamorona ny rafitra any ankoatry ny rafitra, dia omena ambaratongam-pahaizana isan-karazany, sy fomba maodely ahazoana izany fahasambarana izany. ” (10)
Noho izany i Reverend William Walter dia miresaka momba ny zavamananaina miaina amin'ny planeta hafa, samy manana ny fomba fiainan'izy ireo mba hahasambatra. Izany dia mifanaraka amin'ny hafatra nalefan'i Walsch momba ny ETs manam-pahaizana izay mivoatra amin'ny fomba samihafa.
Tantaram-pinoana ho an'ny zaridaina any Joseph Warren MD | Deepak Chopra MD
Misy mpikambana iray fanampiny ao amin'io fikambanana io izay mpitarika tao Boston nandritra ny Revolisiona amerikana. Joseph Warren dia dokotera mpitsabo ary miaramila maty tao amin'ny Battle of Bunker Hill. Dr Warren dia sakaizan'i John sy Abigail Adams ary ny sarin'i Warren dia mbola mihantona ao an-tranon'i Adam, toerana manan-tantara ankehitriny. Ahtun Re dia nanambara izany Deepak Chopra dia ny famerim-ponenana indray ao an-tokantranon'i Joseph Warren.
Raha marina izany, dia avy any amin'ny Revolisiona Amerikanina, avy ao amin'ny Rev. William Walter | Neale Donald Walsch, Abigail Adams Marianne Williamson sy Joseph Warren | Deepak Chopra dia nihaona indray ho mpitarika ara-panahy amin'izao fotoana izao, izay niara-nizara sehatra. Walsch, Williamson ary Chopra dia samy nanohana ny filoham-pirenen'i Etazonia an'i James Otis | John Hagelin, noho izany izy ireo koa dia nanana tànana tamin'ny politika ankehitriny sy ny fanavaozana politika.
Mariho tsara fa tsy navoaka ny raharaha Deepak Chopra Fiverenan'ny revolisionera ary noho izany, i Neale Donald Walsch dia tsy nijery ity tranga manokana ity.)
Fiainana iray hafa teo amin'ny fiainan'i Neale Donald Walsch ho an'i Andrew Jackson Davis
Araka ny nomarihina etsy ambony, nataoko ny fijeriko fa i Marianne Williamson no teraka tamin'ny taonjato fahafito an'i Abigail Adams mifototra amin'ny fomba fanoratana fiteny iraisana. Fanadihadiana momba ny fiteny ao amin'ny John B. Gordon Zava-misy eo amin'ny sehatry ny zokiolona any Jeff Keene manohana io fomba fanoratana fiteny io dia afaka mifanaraka amin'ny fiainan'ny iray hafa.
Ny lalao fiainana taloha faharoa ho an'i Neale Donald Walsch dia natao tamin'ny fomba mitovy amin'izany. Nikaroka momba ny fiainana taloha ho an'i Mark Thurston aho, mpitarika ny ARE Edgar Cayce. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa i Mark dia nanoratra ho sekretera an'ny haitao malaza tamin'ny taonjato faha-18, Andrew Jackson Davis. Nihevitra aho fa ny fomba tsara indrindra hanohizana ity tranga ity dia ny famakiana ireo boky nosoratan'i Davis mba hahitana raha mahita porofo momba ny sekreterany aho.
Nanafatra boky roa an'i Davis tamin'ny alàlan'ny Internet aho. Nanomboka namaky aho ary rehefa avy nandalina pejy 5 dia nanana zavatra niainako toa ahy tamin'ny namakiako ny bokin'i Marianne Williamson. Io dia toy ny marotoa namely ahy teo an-dohako tamin'ny fahatsapako fa efa nihaona tamin'ity fomba fanoratana ity aho taloha. Naharitra minitra vitsy aho vao hitako hoe taiza aho no namaky an'ity mpanoratra ity taloha. Tonga saina tamiko avy eo fa i Davis dia manana ny fomba fanoratra fiteny mitovy, ny feo mitovy amin'ny fiteny, araka ny hita ao amin'ny Resadresaka miaraka amin'Andriamanitra, ny trilogie tsara indrindra nosoratan'i Neale Donald Walsch.
Tsy nisy sary nataon'i Andrew Jackson Davis tao amin'ireo boky nividianako, saingy tsy ela dia nahita portretes aho ary nahatsikaritra fa misy fitoviana mahatsiravina eo amin'i Davis sy Walsch. Nandritra ny fivoriana nanaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa ny Neale Donald Walsch no vatana vaovao indray dia i Andrew Jackson Davis.
Famerenana ny fiainana taloha talenta any Andrew Jackson Davis | Neale Donald Walsch Revelarnation Case
Raha raisina io tranga io, dia naverin'i Neale Donald Walsch mivantana avy hatrany ny talentan'i Andrew Jackson Davis amin'ny fanoratana boky ara-panahy manan-danja amin'ny fampiasana fanomezam-pahasoavana sy ny fandaminana.
Famaranana & Fanohanan'i Neale Donald Walsch ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Raha ny fitambaran-javatra, ny fampahalalana nomen'i Ahtun Re momba ny maha-zava-miaina ny fiainan'i Neale Donald Walsch dia toa efa tanteraka tamin'ny endrika Persona William Walter. Noho ny fahasarotana nahakasika ny fahazoana fampahalalana sy ny sarin'ny Reverend William Walter, dia nampiaiky ahy io tranga io ho fanomezana porofo fa afaka manome ny fampahalalam-baovao marina sy ny lalao taloha i Ahtun Re.
Tadidio fa nokarohina tao amin'ny 2001 ity tranga ity, ela be talohan'ny nikaroharan'ireo fikarohana toy ny Google. Nihevitra aho fa raha toa ka naka asa be dia be mba hitadiavana an'i Walter Reverend teo amin'ny tantara, dia tsy misy fomba ahafantaran'i Kevin Ryerson, olona ny momba ny "Reverend Walter". Nofintiniko fa avy amin'ny fanahy ara-panahy, Ahtun Re, ny fahalalana dia afaka nahazo fahalalana ara-kolotsaina manerantany. Izany dia nanosika ahy hanohy hiara-hiasa amin'i Kevin Ryerson mandritra ny taona maro ho avy.
Zava-dehibe ny manamarika fa i Neale Donald Walsch dia manohana ny lalao iainan'ny fiainany taloha toa an'i Walter Reverend, sy ireo tranga hafa momba ny fanambadiana vaovao ao amin'ny vatana hafa izay navoaka tamin'ity pejy ity. Raha raisina ireo tranga ireo, dia asehony ireto fitsipika mifandraika amin'ny vatana vaovao ireto.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: William Walter sy Neale Donald Walsch dia manana maritrano endrika mifanitsy aminy ary ny fitoviana amin'ny endrika ivelany eo amin'i Neale Donald Walsch sy Andrew Jackson Davis dia mahalana. Misy koa fitoviana ara-batana matanjaka eo amin'i Abigail Adams & Marianne Williamson sy James Otis & John Hagelin. Ny fitoviana amin'ny fisehoana misy eo amin'i Joseph Warren sy Deepak Chopra dia azo ankasitrahana, na dia tsy matanjaka toy ny tranga hafa aza.
Ny fiainana taloha talenta: Ny fanoheran'i Walter sy i Neale Donald Walsch dia samy naneho ny toetran'ireo mpaminany karismatika. Walsch dia nanoratra akaiky ny fahaiza-manaon'i Andrew Jackson Davis tamin'ny nanoratany Resadresaka miaraka amin'Andriamanitra.
Abigail Adams dia iray amin'ireo vehivavy maherifo fantatry ny Revolisiona Amerikanina ary nanampy tamin'ny fahatakarantsika ny tantaran'ny Revolisiona Amerikana tamin'ny alàlan'ny taratasim-panoratany mivaingana. Marianne Williamson dia lasa iray amin'ireo mpanoratra mivarotra indrindra amin'izao androntsika izao. Ny fifandraisana hafa dia voatazona amin'ny antsipiriany Fiverenan'ny revolisionera.
James Otis dia revolisiona ara-politika amerikanina ary i John Hagelin dia nihazakazaka ho filohan'i Etazonia tao amin'ny 2000, izay tohanan'ireo namana niainany taloha, Neale Donald Walsch, Marianne Williamson ary Deepak Chopra.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nampifandray an'i William Walter ny fifandraisana misy eo amin'ireo Amerikana mpioko sy namana avy any Boston Neale Donald Walsch, James Otis John Hagelin, Abigail Adams Marianne Williamson sy Joseph Warren | Deepak Chopra. Ahtun Re dia nanamarika ihany koa an'i Nancy, vadin'i Neale, toa an'i Lydia Lynde, vadin'ny Walter Reverend.